Sidee Qaaxo loo daweeyaa? – somali
Qaaxo waa jirro daawo leh. Bakteriyada Qaaxadu waqti badan ayaa lagu dili karaa. Taasina waa sababta daawadeedu u socoto ugu yaraan lix bilood. Daawayntu isbitaalka ayay kasoo bilaabanaysaa intaa kadibna guriga ayaa lagu sii wadayaa.
Waxaad xaq u leedahay inaad hesho taageero iyo talo inta daaweyntu socoto oo dhan. Haka baqan inaad weydiiso shaqaalaha dad ka tirsan oo kaa daaweynaya wax un waxay doonaanba ha ahaadaane waxa adiga ku walwal galiya. Raac tilmaamaha lagu siiyay. Sidaas ayaad sare ugu qaadi kartaa soo bogsashadaada.
Daaweyntu waxay kasoo bilaabataa isbitaalka
Waxaa macquul ah inaad qabto Qaaxo dad kale ay kaa sii qaadi karaan. Marka marka hore waxaa lagugu daaweynayaa qol kaligaa laguugu tala galay oo isbitaalka kuyaal. Intaa kadib daawada guriga ayaad kusii qaadanaysaa.
Daawooyin dhowr ah ayaad hal mar wada qaadan doontaa. In ka badan hal daawo ayaa loo baahan yahay si loo dilo dhammaan bakteeriyada Qaaxada. Shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalka ayaa kormeeri doona bal in daawooyinku si wanaagsan u shaqeynayaan iyo in kale iyo inaad soo roonaanayso iyo in kale. Mararka qaarkood daawooyinku saamayn kale ayay keenaan ama mid ka mid ah daawooyinka ayaan kugu habboonayn. Xaaladaan dhaqtarkaaga ayaa xal u heli doona. Bogsashadaada waxaa lasii raacin doonaa baaritaano kale.
Ka hor inta aysan suurtagal kuu noqon inaad daawadaada ku sii wadato guriga, waxaa la isku raacayaa sida aad ku heli doonto daawooyinkaaga guriga inaad ku qaadato loogu tala galay. Waxaad daawooyinka ka heli kartaa xarunta qaabilaada magangalyo doonka, isbitaalka, xarunta daryeelka caafimaad, iskool ama guriga.
Waxaad sidoo kale la imaan kartaa alaabtaada xoogaa ka mid ah sida buugaagtaada iyo jariidado qolka. Saaxiibadaa iyo qaraabadaada waa ay kusoo booqan karaan. Waa inay raacaan tilmaameyaasha ay shaqaalaha caafimaadku siinayaan ka hor inta aysan qolka soo galin. Carruurta looma ogola inay soo galaan qolka karaantiilka.
Marka aad qufacdo bakteeriyada Qaaxada ayaad kusii deyn kartaa hawada. Taasi waa sababta dhammaan shaqaalaha kugu dhex daaweynaya qolka ay tahay inay isticmaalaan sangashiyo si aysan hawada uga jiidin bakteeriyada. Marka aad qufaceyso ama aad hindhisayso fadlan fasaleeti ku dabool afkaaga iyo sankaaga. Ku rid sanduuqa qashinka markaad isticmaasho kadib. Hadii qof kale uu soo galo qolka isticmaal af iyo san xir.
Ku daaweynta bukaanka xarun qaxooti ama guriga
Aad inaad u roon tahay ayaad caadiyan dareentaa marka daawadu kuu socoto asbuucyo tiro yar. Caafimaadkaagu wuu soo hagaagayaa. Laakin bakteeriyadii Qaaxadu weli jirkaaga ayay ku jirtaa. Waxaa muhiim ah inaad sii wadato qaadashada daawadaada ilaa dhammaan bakteeriyadu ay ka dhimato, xataa hadii aysan kugu harin wax calaamado ah. Ha baddalin ama ha joojin daawadaada. Hadii dhibaato ay ku qabato, kalkaalisadaada kala tasho. Dhibaatooyinka waa la wada xallin karaa.
Waxaad un ku daawoobi kartaa inaad si joogta ah u qaadato dhammaan daawadii laguu soo qoray. Mararka qaarkood daawadu dareen xun ayay ku dareensiin kartaa ama inaad qaadato ayaad halmaami kartaa. Taasi waa sababta kalkaaliso ama shaqaale kale uu kuu siinayo daawo uuna u eegayo inaad liqdo. Marmar asaga ama ayadu waxay kajawaabi kartaa suaalahaaga, waxay eegi kartaa soo bogsashadaada iyo dhibaatooyinka laga yaabo inay daawada ka dhashaan. Waalidiinta ayaa siin kara daawada carruurta yaryar ayadoo shaqaale caafimaad ama shaqaale kale ay caawinayaan.
Waa sidee gudaha qolka karaantiilku?
Adi kaligaa ayaa qol kujiraya. Ogolaansho la’aan qolka kama bixi kartid. Qolka karaantiilku wuxuu leeyahay musqul iyo musqusha qubeyska oo ku dhexyaal. Sidoo kale wuxuu leeyahay taleefan, TV iyo internet. Raashinka iyo daawada qolka ayaa laguugu keenayaa. La xiriir qaraabadaada iyo saaxiibadaa adoo isticmaalaya taleefanka ama kombuyuutarka. Taasi waxay kaa dhigaysaa qof dareemaya si sidii hore ka wanaagsan waqtigana ciyow ayaad isku dhaafinaysaa.
Soo kabsashadaada waxaa si taxadar leh isbitaalka loola soconaya 1-2dii biloodba mar inta daawadu kuu socoto. Baaritaanadu inta ay socdaan, raajada feeraha, baaritaan dhiigga ah iyo xaakada aad tufto ayaa la qaadayaa. Waxaana intaa kadib kuu suurta galaysa inaad dhaqtarka suaalo weydiiso.